Xoghayaha guud ee QM oo Adduunka uga digay khatarta dagaal qabow oo ku soo wajahan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xoghayaha guud ee QM oo Adduunka uga digay khatarta dagaal qabow oo ku soo wajahan
Xoghayaha guud ee QM oo Adduunka uga digay khatarta dagaal qabow oo ku soo wajahan
Adduunku waa inuu sameeyaa intii karaankiis ah si looga hortago Dagaal Qabow oo cusub, sida uu ka digay madaxa Qaramada Midoobay, xilli uu furayey shir guud oo ay dejinayaan xiisadaha Mareykanka iyo Shiinaha iyo saamaynta aafada Covid-19.
Xoghayaha guud António Guterres ayaa sheegay in adduunku uu ku socdo “jiho halis ah”, isaga oo ka hadlaya jabka ay abuureen “labada awood dhaqaale ee ugu waaweyn” adduunka.
Golaha sanadkan waxaa inta badan lagu qabtay hab muuqaal toos ah.
Caadiyan, xarunta UN-ka waxaa buuxin lahaa hoggaamiyaasha adduunka iyo wakiilladooda, kuwaas oo munaasabaddan u adeegsada inay kaga hadlaan guulaha ay gaadheen iyo inay la hadlaan kuwa la tartamaya.
Taa beddalkeeda, shakhsiyaad kooban oo ay ka mid yihiin sida madaxweynaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa bixiyay khudbado horay loo sii duubay. Waxaana durba laga dareemeyey sida ay xaaladda labada dal u kacsan tahay
Dhanka kale khudbad uu ka jeediyay dhismaha UN-ka ee New York, Mr Guterres wuxuu yiri: “Waxaan u dhaqaaqeynaa jiho aad u khatar badan.
Adduunkeennu ma awoodi karo mustaqbal ay labada dhaqaale ee ugu waawayn adduunka ku kala jabeen si aad u weyn – mid kastaana wuxuu leeyahay xeerarkiisa ganacsi iyo kan maaliyadeed iyo internetka iyo awoodaha sirdoonka macmalka ah.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku khilaafsan arrimo dhowr ah, laga soo bilaabo ganacsiga illaa laga soo gaadhay cudurka faafa ee coronavirus.
Mr Guterres oo ka hadlayey safmarka Karoone ayaa sida oo kale yidhi: “Aafadani waa dhibaato ka duwan wixii aan waligeen arkaynay. Laakiin sidoo kale waa nooca dhibaatada aan ku arki doono qaabab kala duwan marar badan iyo mar kale. Covid-19 keliya aha dhawaaq ina toosinaya, waa se tababar adduunyada u sii diyaarinaya caqabadaha soo socda. “
Xoghayaha guud ee QM oo Adduunka uga digay khatarta dagaal qabow oo ku soo wajahan was last modified: September 23rd, 2020 by Admin
Farmaajo oo maanta khudbad ka hor-jeedinaya BF iyo R/W Rooble oo cod loo qaaday
Maraykanka iyo ururka Taliban oo heshiis xabad joojin ah mar kale kala saxiixday
Somalia: Respect for human rights vital for future elections – UN report
Dhageyso:-Saraakiisha Caafimaad Bisha Cas ee Gobolka Gedo oo ka digey Cudurka shuban Biyoodka oo Baardheere ku sii fidaya(Wareysi)
Taliyaha ciidanka milatariga oo kormeeray xerada Lama galaay (Daawo Sawirro)